Rasposhivalnaya imoto namuhla iyunithi ukuthi akugcini nje esetshenziselwa mass zezimboni lokuthunga knitwear, kodwa futhi studios esincane nomuzi studios. Okunye esizokwenza okuxhumene ithandwa kangaka ngenombolo izici zalezi amadivaysi.
Okwakuthandelene izindwangu yesimanje kunazo - ukuluka, okuyinto kakhulu kuthuthukisa izakhiwo zabo eziningi. imikhiqizo enjalo kuyoba umbimbi kancane, futhi ngezinye izikhathi ngisho zidinga ayina. Labo nezicubu zinezikhathi okukhulu bokwenza kanye stretchability, avame ukusetshenziswa lokuthunga ka nezemidlalo, njengoba bayakwazi ukumelana imithwalo eside. Knitwear ishibhile yoboya noma ukotini Indwangu, futhi ngaleyo ndlela kunezinzuzo eziningi. Kodwa eliphezulu kusebenziswe futhi obmetochnyh yokuxhuma ezivuzayo kwimikhiqizo wenza lezi zincwadi namaBhayibheli kudinga ukusetshenziswa imishini ekhethekile. umshini Rasposhivalnaya - kungcono nje umshini ezinjalo.
idivayisi enjalo yenza umthungo flat, olubizwa nangokuthi rasposhivalnym. Kuphela ngosizo umshini enjalo kungaba ugaye futhi sicubungule emalungeni ezihlukahlukene, ukuze kuthi lapho welulela, bona ungajahi, ngoba umphetho sisalokhu kanye lendwangu. Le mpahla kumane esisemqoka nezemidlalo, kanye imikhiqizo eyenzelwe imisebenzi yangaphandle. Ngaphezu kwalokho, rasposhivalnaya umshini zezimboni has a ijubane eliphezulu kakhulu, okwenza ngokusemandleni ethu ukuze siqinisekise umkhiqizo esiphezulu evumelanisa mass.
Ukuze imishini rasposhivalnyh itfutfukise amathebhu ezahlukahlukene kanye namathuluzi ukuze bakwazi ukufeza okuningi imisebenzi eyengeziwe. Uma uyikha phezulu le, amadivayisi njenge kungase kubonakale monster - elikhulu, omkhulu, no-inani elikhulu tensioners nezinye izakhamzimba ezihlukahlukene. Nokho umshini rasposhivalnaya has a silula yokusebenza isimiso. Lapha kukhona izinaliti eziningana senzelwe elingenhla ngentambo Looper phansi futhi ngezinye izikhathi kuba khona futhi i niteukladchik engenhla. Lokhu kukhetha yakudala. Ukuze ukusebenza kwawo esetshenziswa 5 kwayo.
umshini Rasposhivalnaya is ikakhulukazi esetshenziselwa kucutshungulwa emaphethelweni imikhono phansi umkhiqizo. Umphetho onqenqemeni Kwenziwa ukuze ububanzi oyifunayo futhi zibekwe Stitch nge izinaliti ezimbili noma ezintathu, kuye ngokuthi imodi akhethiwe ohlangothini front. Kumi esiqongweni sezindawo yaseZimbabwe bheka iyafana emva evamile Shuttle imoto, futhi kusukela ngaphakathi ungabona "pigtails", phakathi lapho ngentambo aphansi. Lokhu kuvumela ukugcina kwesigaba Stitch izicubu kusukela bechitha. Lolu hlobo ukwelashwa has lonke mass yezinzuzo uma beqhathaniswa nabanye. Umkhiqizo akazange nje athole kakhulu izici obusebenzayo, ibuye ekubeni bahle ngokwengeziwe ukubukeka.
Rasposhivalnaya lokuthunga machine abakwazi kuphela agobe onqenqemeni, kodwa futhi ukuze enze neminye imisebenzi eminingi. Ngosizo ke ungakwazi nastrachivat eluka noma gum, kanye nezinye izinto eziningi, okudinga unyawo akhethekile inaliti. Uma sisebenze inaliti eyodwa kuphela, lo mshini ke ingasetshenziswa njengendlela gaya.
Uma udinga idivaysi olunjalo, kungenzeka ukuncoma ezinye onobuhle ezingabizi kakhulu ukuthi izindlela ezihlukene, kuba: GK31030 ejwayelekile futhi Juki MF-7723-U10-B48.
Izinhlobo kanye nokwenza inzuzo
Uyini Refractory Izinsimbi?
Corvette Project 20385 "Gremyashchy": izici nezithombe. Corvette "Agile"
Indlela ukubhala kule "Maynkraft" kule ngxoxo?